အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ - ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အပေါက်
အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက် compulsive features တွေ: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ဖြစ်ရပ် (2012)
စှဲမွဲမှု. 2012 Oct;107(10):1726-34. doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03546.x.
El-Guebaly N ကို, Mudry T က, ဇော J ကို, Tavares H ကို, Potenza MN.
စိတ်ရောဂါကုသရေးဌာန၊ Calgary တက္ကသိုလ်၊ အယ်လ်ဘာတာ၊ ကနေဒါ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
DSM-V ၏အခြေအနေတွင်မည်ကဲ့သို့အာရုံစိုက်မည်ကိုဖော်ပြရန် စှဲမွဲမှု နှင့်မလှူရောဂါဗေဒ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်ပေါ်ထွက်လာသည် လောင်းကစားဝိုင်း (PG) ။
စနစ်တကျစာပေ ပြန်လည်သုံးသပ် တစ် ဦး အဖြစ် PG ၏အဆိုပြုထားပြန်လည်ခွဲခြားဘို့သက်သေအထောက်အထား၏ စှဲမွဲမှု.
(ဈ) ဖြစ်ရပ်ဆန်းမော်ဒယ်များ စှဲမွဲမှု အချိန်ကြာမြင့်စွာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာနှင့်အတ္တ - ဒြပ်စင် / အတ္တ - ဒစ်စတိုနစ်ခရိုမိုဒီယမ်၏မှုန်ဝါးမှုတို့နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်လှုံ့ဆော်မှုမှအနိုင်ကျင့်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း၊
(ii) PG နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ဘုံ neurotransmitter (dopamine, serotonin) ပံ့ပိုးမှုများကို (SUDs);
(၃) 'အမူအကျင့်' နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုအကြားမျှဝေထားသောအာရုံကြောတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စိတ်စွဲလမ်းမှု - မလိုက်နာနိုင်သည့်ရောဂါ (OCD)၊ Impulse Control Disorders (ICDs) နှင့် SUDs အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက် neuroimaging ထောက်ခံမှု၊
()) မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များသည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများထက်စာနာခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းခြင်းကဲ့သို့သော endophenotypic ဆောက်လုပ်ရေးများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်စပ်မှုရှိခြင်း၊
(၅) OCD နှင့်မတူဘဲ SUD နှင့် PG အကြားပိုမိုနီးကပ်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ထုတ်သည့်အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံများ၊
(၆) အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် pharmacotherapeutic စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များ OCD နှင့်အတူထက် SUDs နှင့် PG အကြားပိုမိုနီးကပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ဒေတာ။ ထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့မှုကုထုံးအဖြစ်အလိုက်အမူအကျင့်ကုထုံး, ရောဂါများကိုဖြတ်ပြီးအချို့သောတူညီချက်အကြံပြုခြင်း, OCD, PG သို့မဟုတ် SUDs မှသက်ဆိုင်ပေါ်လာပါသည်။
PG သည် OCD နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် SUDs နှင့်ပိုမိုတူညီသည်။ Impulsivity ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ဆင်တူ, compulsivity ၏လေ့လာမှုများသင်တန်း, PG, SUDs နှင့် OCD ၏ differential ကိုရောဂါနှင့်ကုသမှုကိုရည်မှတ်အလားအလာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကိုင်ထားပါ။
© ၂၀၁၁ စာရေးသူများ၊ စှဲမွဲမှု ©၏လေ့လာမှုအတွက် 2011 ခုနှစ်လူ့အဖွဲ့အစည်း စှဲမွဲမှု.